सबैलाई रूवाउने यस्तो मार्मिक घटना, आठ दिनपछि दुलहीले संसार छाडीन् , यस्तो छ कारण — Imandarmedia.com
१चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीमा खस्ने खतरा
२प्रहरी र तस्क’रबीच गो’ली हा’नाहा’न, कम्तीमा २५ जनाको मृ’त्यु
३के भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी अब ओरालो लाग्न लागेको हो?
४राष्ट्रियसभा सदस्यमा बादल सहित तीन जनाको उम्मेदवारी
५रसियन स्पुतनिक खोप ल्याउन नेपाल सरकारले कसलाई दियो अनुमति
६निषेधाज्ञामा बढी भाडा लिनेह ३ जना पक्राउ
७राष्ट्रपतिलाई माधव नेपालले दिए यस्तो जवाफ
८गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
९बिल गेट्सले डिभोर्स गरेकी श्रीमती मेलिन्डाको नाममा ट्रान्सफर गरे यति धेरै सम्पति र खाेले यस्ताे बेग्लै रहस्य
१०नेपाली भौतिकशास्त्री साहुले अमेरिकामा पाए साढे ३ करोडको अवार्ड
११संसद सचिवालयमा कार्यरत उपसचिवको कोरोना संक्रमणबाट निधन
१२नगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय, संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार, एम्बुलेन्स फ्री
२पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नर्भिक अस्पतालले दियो यस्तो जानकारी, पूर्वराजा तनावमा
३नेपलामा भोलिदेखि लकडाउन, तर खुल्लै रहनेछन् यी क्षेत्र
४प्रधानमन्त्री ओलीले बल्ल गरे यस्तो घोषणा, जनता खुशी नै खुशी
५काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्यो यति ठुलो निर्णय,उपत्यका बासिलाइ यति ठुलो राहत
६नेपालमा कहिलेदेखि हुँदैछ लकडाउन ? मन्त्रिपरिषद् बैठकले बल्ल गर्यो यस्तो निर्णय
७डब्ल्यूएचओको यस्तो डरलाग्दो चेतावनीले युरोपभर त्रास
८सपनामा मृत्यु हुनुको अर्थ के हो ? पैसा देख्नुको मतलब पनि बुझ्नुहोस्
९ओलीलाई तह लगाउन प्रचण्डले पाए यस्तो बिशेष अधिकार, धुम्बाराहीदेखि बालुवाटारसम्म हलचल
१०राष्ट्रपतिले दिएको तक्मामा किन छैन चुच्चे नक्सा ? यस्तो छ खास रहस्य
११पूर्वरानी कोमलको स्वास्थ्यबारे हस्पिटलले दियो यस्तो जानकारी
१२फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै नेपलामा,अब के हुन्छ ?
सबैलाई रूवाउने यस्तो मार्मिक घटना, आठ दिनपछि दुलहीले संसार छाडीन् , यस्तो छ कारण
काठमाडौं, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-११ पैंयुटारकी २३ वर्षीया युवतीको वैशाख ११ गते बिहे भएको थियो। भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका- ८ सुडालका युवकसँग उनको मागी बिहे भएको थियो।
दुबै पहिले परिचित थिएनन्। आफन्त-आफन्तबीच चिनजानको आधारमा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध जोडिन पुगेको थियो। उनीहरूको चैतमै इङ्गेजमेन्ट भएको थियो। बिहेको लगन त्यतिबेलै जुराइएको थियो।
वैशाख ११ गते बिहे सम्पन्न भयो। त्यतिबेला कोरोनाको महामारी बढिरहेको त थियो, तर अहिलेको जस्तो निषेधाज्ञा थिएन। आफन्तका अनुसार बिहे भएको भोलिपल्ट दुबै जना दुल्हन फर्काउन कपन आएका थिए। त्यही दिन युवतीलाई खोकी लाग्न थाल्यो। बेस्सरी खोकी लागेपछि उनलाई भक्तपुर अस्पताल लगियो।
‘हामीले यहाँबाट भक्तपुर लग्यौं, त्यहाँ एन्टिजेनबाट कोरोना परीक्षण गरियो,’ बुढानिलकण्ठ-११ वडासदस्य तथा युवतीका नातेदार विमल लामाले भने, ‘त्यसपछि गाह्रो हुन थाल्यो।’ उनका अनुसार बिहेमा सीमित आफन्तहरूलाई मात्र बोलाइएको थियो। धेरै ठूलो भीडभाड हुने गरी मान्छे थिएनन्।
बिहे हुनुभन्दा अगाडि युवतीमा कोरोनाको खासै लक्षण थिएन। भक्तपुर अस्पतालमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनलाई क्रमश: समस्या थपिन थाल्यो। श्वासप्रश्वासमा अत्याधिक समस्या देखिएपछि उनलाई १३ गते आइसियूमा राखियो। आइसियूमा राखेपछि पनि उनी निको भइनन्। सोमबार दिउँसो मृत्यु भयो।
उपचारमा संलग्न डाक्टरका अनुसार ती युवतीलाई अस्पताल आउँदै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो। उनलाई ज्वरो, रुघाखोकी पनि थियो। परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ त छँदैथियो, त्यसमाथि उनलाई निमोनिया भइसकेको थियो।
‘परीक्षण गर्दा फोक्सोको दुबै भाग निमोनियाले लगभग ड्यामेज भइसकेको थियो,’ भक्तपुर अस्पतालका कोभिड प्रमुख डा. सुनिल ढुंगेलले भने। भर्ना भएकै दिन आइसियू खाली थिएन। उनलाई प्रतिमिनेट पन्ध्र लिटर अक्सिजन दिएर राखियो।
बिरामी निकाल्ने अवस्थाको बेड खाली गराएपछि उनलाई भोलिपल्ट आइसियूमा भर्ना गरियो। तर, उनको स्वास्थ्य जटिल हुँदै गयो। त्यसपछि भेन्टिलेटर मेसिनको सहायताले मास्कद्वारा श्वासप्रश्वास गराइयो। त्यो प्रयास पनि काम लागेन।
‘अन्तिममा पूरै भेन्टिलेटर मुखबाट पाइप छिराएरै श्वासप्रश्वास गराइयो, ती कुनै प्रयास आशालाग्दा भएनन् र उहाँको मृत्यु भयो,’ ढुंगेलले भने। उनका अनुसार यो बीचमा युवतीलाई कोरोना प्रत्याक्रमणका सबै औषधी चलाइयो। निमोनिया ठिक पार्ने औषधी दिइयो।
प्लाज्मा थेरापी विधिबाट पनि उपचार गरियो। ‘कोभिडको बिरामीलाई त्यसै पनि श्वाप्रश्वासको समस्या हुन्छ, त्यसमाथि उहाँको फोक्सो निमोनियाले खाइसकेको थियो,’ ढुंगेलले भने, ‘उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर शतप्रतिशत अक्सिजन चलाइयो, तर बचाउन सकिएन।’
युवतीसँग विवाह गरेका युवक इन्टेरियर डिजाइनर हुन्। बिहे भएको एक दिनमात्र उनीहरू सँगै रहे। दुलही लिएर ससुराली हिँडेका बेहुला उनलाई लिएर घर फर्किन पाएनन्। बेहुलाका परिवारले दुलही भित्र्याउने रीतिथिति पूरा त गर्‍यो तर उनी त्यो घरमा दोस्रो दिन पनि बिताउन पाइनन्।
उनी परिवारकी एक्ली छोरी थिइन्। पैयुँटारमा उनीहरूको बसोबास पहिलेदेखिको हो। वडासदस्य लामाका अनुसार उनका २० वर्षीय एक भाइ छन्। उनी ब्याचलर तेस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। ‘बिहे भएको एक साताभित्रै उनले संसार छोडिन्, परिवारमा ठूलो बज्रपात परेको छ,’ लामाले भने।
उनको अन्तिम संस्कार पशुपति आर्यघाटमा गरिएको छ। डाक्टर ढुंगेलका अनुसार ती युवतीलाई बिहेपहिले नै रूघाखोकी लागेको बुझिएको छ। तर, उनले त्यसलाई सामान्य ठानेकाले समस्या बढेको हुनुपर्छ।
‘बिहे नजिक आएकाले उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या हुँदा नभनेको हुनुपर्छ, फेरि हामीले उहाँकै मुखबाट पहिले रुघाखोकी थियो भन्ने सुनेनौं पनि,’ ढुंगेलले भने। (खिलानाथ ढकालले सेतोपाटीमा लेखेको समाचार साभार गरिएको)
यसैबीच काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप कडा हुने भएको छ। उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले आगामी वैशाख २९ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो।
यो सँगै काठमाडौंमा अब निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिने भएको छ । नयाँ नियमअनुसार अब अत्यावश्यक काम बाहेकमा घरबाहिर निस्कन पाइने छैन । दुई जना व्यक्तिबीच कम्तीमा २ मिटरको भौतिक दूरी हुनु आवश्यक छ भने अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
निषेधाज्ञा वैशाख २२ गतेदेखि थप भइ वैशाख २९ गतेसम्म कायम हुनेछ । जसमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधन काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।
अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, संस्थान, बीमालगायतका कार्यालयहरुमा एक चौथाइ कर्मचारीमात्र उपस्थित हुने गरी सञ्चालन गर्न गराउन व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । सरकारी कार्यालयको हकमा मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखले जारी गरेको सवारी पास र परिचयपत्रको आधारमा आवतजात गर्न पाइनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाको हकमा काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालय मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ र केन्द्रीय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । र, सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्चालनको हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ ।
विकास निर्माणका सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्यरुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने तथा निर्माण सामग्री ढुवानी राति १० बजेदेखि विहान ४ बजेसम्म मात्रै आवतजावत गराउनुपर्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुको हकमा हवाई टिक, पासपोर्ट, भिसा हुनेहरुलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गरिनेछ । त्यसैगरी खाद्यान्न पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु विहान ९ बजेसम्म खुला गरिनेछ भने स्थानीय ढुवानीको हकमा विहान १० बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
त्यसैगरी पत्रकारहरुको हकमा सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा मात्रै आवतजावत गर्न पायनेछ । सूचना विभागको प्रेस पास नभएका सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीहरको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहहरुले न्यूनतम कर्मचारी मात्रै खटाउने र सोको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
निलो प्लेटका सवारी साधनको हकमा परिचय बाहक पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी पास आवश्यक पर्ने छैन । उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्यरुपले १० दिन क्वारेन्टिन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्यस्थलमा जान पाइने छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण वृद्धि भएसँगै ४५ भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ। संक्रमित बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा र आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन्।
कोरोना देखिएका ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै निषेधाज्ञा लगाउन सक्छन्। पहाडी भेगमा दुई सय र काठमाडौं उपत्यकासहित मधेशका क्षेत्रमा पाँच सय बढी संक्रमित भेटिएपछि निषेधाज्ञा लगाउन सकिन्छ।
महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बाग्लुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालिकोट, स्याङजा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ, वैतडी, नुवाकोट, धनुषामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन चल्न दिइएका छैनन्।
रसियन स्पुतनिक खोप ल्याउन नेपाल सरकारले कसलाई दियो अनुमति
निषेधाज्ञामा बढी भाडा लिनेह ३ जना पक्राउ
गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु
संसद सचिवालयमा कार्यरत उपसचिवको कोरोना संक्रमणबाट निधन
बागमती प्रदेशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३६ हजार भन्दा बढी
सरकारले साढे ६ हजार अक्सिजन सिलिण्डर जफत , कहाँ-कहाँ बाँडिदैछ ?
संक्रमितको नयाँ रेकर्ड–थप ९०७० जनामा संक्रमण पुष्टि ५४ जनाको मृत्यु
डीसीसीएमसीले दियो ललितपुरका चार अस्पताललाई अक्सिजन सिलिण्डर
बाँकेमा मात्रै ९२७ नमुना परीक्षण गर्दा ७०० मा संक्रमण पुष्टि